महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासको मुद्दा दर्ता,पक्राउ गर्ने तयारी महरालाई हिरासतमा लिन तयार भयो प्रहरी ! | अपन जनकपुर
महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासको मुद्दा दर्ता,पक्राउ गर्ने तयारी महरालाई हिरासतमा लिन तयार भयो प्रहरी !
गृहमन्त्रीसंगको बैठकपछि महरालाई हिरासतमा लिन तयार भयो प्रहरी
प्रहरीकोमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रहरीले अदालतको आदेश लिएर पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । महरालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । ‘आईतवार अदालतको आदेश लिएपछि उहांलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान सुरु गर्छौ । ’ प्रहरी स्रोतले अप्पन जनकपुरलाई भन्यो ।
महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासको मुद्दा दर्ता,पक्राउ गर्ने तयारी